‘गाउँपालिका केन्द्रको विवाद जनप्रतिनिधिले समाधान गर्ने हो, नेकपाले सहजिकरण गर्नेछ’ - Edolakha
‘गाउँपालिका केन्द्रको विवाद जनप्रतिनिधिले समाधान गर्ने हो, नेकपाले सहजिकरण गर्नेछ’
3 months ago/Friday, October 25th, 2019
पूर्व एमाले र नेकपा माओवादी वीच पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोलखाले जिल्लादेखि वडा तहसम्मको कमिटी गठन गरिसकेको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश र सँघीय सरकार समेत नेकपाकै छ । तर, पार्टी एकतापछि तल्लो कमिटीसम्म चलायमान हुन नसकेको पार्टी कार्यकर्ताहरुकै गुनासो छ । यहि सन्दर्भमा दोलखाका केहि स्थानवाट केहि व्यक्तिहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको चर्चा पनि छ । कालिन्चोक गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रस्तुत छ, यीनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी दुर्गा बस्नेतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दोलखाका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी ।
तँपाई यतिखेर नेकपा दोलखाको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? जिल्लामा पछिल्लो समय सिर्जना भएका समस्याहरुलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेकपा दोलखाको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले समस्या मात्रै छैनन् धेरै कामहरु सम्पन्न भएका छन् जिल्लामा । काम गर्दै जाने दौरानमा कतिपय समस्याहरु आउँछन् । यसलाई छलफल र बहशको प्रक्रियाद्धारा हल गर्दै निकाश निकाल्दै अघि बढिन्छ ।
अनि, तँपाईको गृह घर भएकै कालिन्चोक गाउँपालिकाका केन्द्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ नी ?
यो आज मात्रै होइन । हिजोदेखि नै छलफल बहशको प्रक्रियामा छ । पहिले भौगोलिक पुर्नसंरचना भएपछि केही अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ । त्यतिवेला राजनितिक संयन्त्र र प्राविधिक समितिले पुर्नसंरचना गरेको हो । साझा समाधानका रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले छलफल बहश प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि हुने बहशहरु स्वभाविक छन् ।
यो नेकपाले गर्ने भन्दा नि यसलाई ऐन नियम कानुनको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । त्यसमा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । ती विषयहरुलाई उहाँहरुले विधि प्रक्रियाद्धारा ऐन कानुनभित्र रहेर राज्यको नियमभित्र रहेर निर्णय गरेर जाने विषय छँदैछ । राजनितिक पार्टीको हिसावले चाँही निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका हुनाले कतिपय विषयमा सहजीकरण गरिदिने र सुझाव दिने विषय रहन सक्छ ।
कालिन्चोकमा नेकपावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नैं दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । समस्या जटिल बन्दैछ । नेकपाले यस बिषयमा के गर्छ ?
यो बिषयलाई यहि रोकेर म पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु । तँपाई पार्टीको जिल्ला सचिव र हाल कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनहुन्छ ? पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अनुभव ?
अनुभवको कुरा गर्दा हिजो नै पार्टी एकिकरण नहुँदा एउटा पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेरै आएको अहिले दुई वटा पार्टी एकिकरण भएको छ । पार्टी शक्तिशाली छ । सवैका आ–आफ्ना धारणाहरु विचारहरु हुन्छन् । पार्टी सवै पात्र र प्रवृतिहरुको पुञ्ज हो । त्यसलाई समाधान गर्ने, नयाँ निर्णय, नयाँ योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व हो । त्यसले गर्दा हिजोदेखि नै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको हुनाले त्यस्तो फरक अनुभूति छैन । जिम्मेवारी बोध अझ बढी भएको छ ।
दुई पार्टी एकिककरण भएर नेकपा बनेको अवस्थामा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनको बिषय पनि जटिल ढंगले उठिरहको छ । असन्तुष्टि व्यवस्थापन पार्टीले कसरी गर्दैछ ?
दोलखाको सन्दर्भमा धेरै व्यवस्थापन गरीसकेका छौँ । दुवै पार्टीमा धेरै पार्टीको जमात भइसकेपछि निर्वाचनमा पनि सवैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी हाँसिल गरेको हो । त्यो भएपछि धेरै कार्यकर्ता हुनु स्वभावीक पनि हो । अहिलेसम्म कार्यकर्ताको जिम्मेवारी ठोस भइसकेको छ । बाँकी सबै कार्यकर्ता पार्टीमा जो हिजोबाट लागेका, हिजोदेखि योगदान गरेका साथीहरुको कुनै न कुनै भूमिका सुनिश्चित गर्दै र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि वातावरण सिर्जना गरीराखेको छ । अझै केही बाँकी हुनुहोला विधिप्रक्रिया र वैठकको निर्णयसँगै सवैलाई जिम्मेवारी सहित व्यवस्थापन गरेर जान सजिलो छ, केही गाह्रो छैन दोलखामा ।
दशैं तिहारको वीचमा नेकपा दोलखा गाउँगाउँमा अभियान लिएर जाने भन्ने कुरा सुनिएको थियो । खासै अभियान चलेको त देखिएन नी ?
दशैँ तिहारको सन्दर्भमा मुख्यतः भेटघाट चियापान कार्यक्रम, चियापान आदानप्रदान कार्यक्रमलाई नै हामीले निर्णयको रुपमा अघि सारेका थियौँ । त्यो जिल्लाभर नै भएको छ । दशैँदेखि तिहारसम्मको विचमा सवै पालिका र वडासम्म कार्यकर्ता भेटघाट, चियापान, शुभकामना आदानप्रदानहरु भइराखेका छन् । जिल्ला पार्टीले घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु गरेर त्यसपछि हरेक गाउँपालिका र वडाहरुले सञ्चालन गरीराखेका छन् । त्यो अहिले पनि भइरहेको छ । मलाई त खासैभएन भन्दा पनि सवैभन्दा बढी भयो जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।
जहाँसम्म नेकपाका कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको चर्चा छ । चर्चा गरिए जस्तो होईन । केहि हाम्रा समर्थकहरु, तल्लो तहको कमिटीमा यसअघि रहेका साथिहरु गए होलान् । तर, उहाँहरु फेरि पार्टीमा फर्किनु हुनेछ, हामी समिक्षा सहित उहाँहरुलाई आफ्नै पार्टीमा फिर्ता ल्याउने छौं । उहाँहरु आफैंले बुझ्नु हुनेछ । हिजोको त्याग र बलिदानीलाई सजिलै बिर्सिएर अर्को कठिन बाटो अपनाउनु हुने छैन ।
स्थानीयदेखि सँघसम्म नेकपाको सरकार बनेका बेला दोलखामा नेकपाका केहि कार्यकर्ताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेको चर्चा छ नी ?
हो, तीनै तहको सरकार नेकपाकै छ यतिवेला । सरकारको व्यवस्थापको कुराहरु कतिपय मिलाउँदै जाँदाखेरी कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टिहरु पनि भए होलान् । हाम्रो पनि कतिपय भूमिका पुग्न सकेन होला । साथिहरुको गुनासा र असन्तुष्टिहरुलाई पार्टीले सम्वोधन गर्नेछ । जहाँसम्म नेकपाका कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको चर्चा छ । चर्चा गरिए जस्तो होईन । केहि हाम्रा समर्थकहरु, तल्लो तहको कमिटीमा यसअघि रहेका साथिहरु गए होलान् । तर, उहाँहरु फेरि पार्टीमा फर्किनु हुनेछ, हामी समिक्षा सहित उहाँहरुलाई आफ्नै पार्टीमा फिर्ता ल्याउने छौं । उहाँहरु आफैंले बुझ्नु हुनेछ । हिजोको त्याग र बलिदानीलाई सजिलै बिर्सिएर अर्को कठिन बाटो अपनाउनु हुने छैन । अहिले हामीले समय दिएनौँ होला भेटघाट भएन होला । परिस्थिती त्यस्तै थियो । हामी निश्चय पनि सवै गाउँ, टोल र हाम्रा मतदातासम्म पुग्ने छौं । उहाँहरुको कुरा सुन्ने छौं । केहिकतै समस्या रहेछ भने त्यसलाई पार्टीले सम्वोधन गर्र्नछ ।
खास समस्या चाँहि के हो ? तँपाईहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो की ?
व्यक्तिका आ–आफ्नो स्वभावहरु हुन्छन् त्यो स्वभाविक हो । हामीले संस्थागत निर्णय गरेर जाने हो । व्यवस्थापनको क्रममा नेकपा दोलखाले त जिल्लादेखि स्थानीय तह र वडासम्म सवै कमिटीहरु बनाइसकेको छ । त्यसमा बहश छलफलहरु पनि भइरहेका छन् । पार्टी र जनप्रतिनिधिबीचमा थुप्रै विभागहरु पनि गठन भइरहेका छन् । पार्टी र जनप्रतिनिधिबीचमा थुप्रै छलफलहरु पनि भइरहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सवै ठाउँमा नेतृत्व पुग्न पक्कै पनि सक्दैन, सकेन होला । कतिपय ठाउँमा पुग्न नसक्दा परेका समस्याहरु होलान् । त्यस्तो रहेछ भने पनि फेरी साथीहरुलाई भेटेर छलपफल गर्दै व्यवस्थापन गरेर जाने नै छौँ । अब त्यति हुँदाहुँदै पनि एकाध समस्याहरु जन्मिरहन्छन् । समस्या आउनु नराम्रो कुरा हैन । समस्या आइसकेपछि समाधान गर्नु ठुलो कुरा हो । समाधान गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व अनवरत रुपमा लागि पर्नेछ र लागी पनि रहेको छ ।
नेकपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरुमा निराशा भएको, तलसम्म पार्टी एकताको भावना अझै हुन नसकेको भन्ने गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
दोलखामा त त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई हिजो पुरानै जिम्मेवारीमा नहुँदाखेरी केही असन्तुष्टिहरु लाग्न सक्छ । यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल चल्छ पनि यो स्वभाविक हो । जो अहिले कार्यकर्ताहरुले केही विषय राख्नु नै असन्तुष्टि होइन । यो बहश हो यो छलफल हो । त्यति ठुलो गुनासोको कुरा होइन, यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । व्यवस्थापनका पार्टी निरन्तर लागिराखेको छ । संक्रमणकालले केही निराशा छायो । एकिकरण प्रक्रिया लम्विदाखेरी । हामीले हल गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि ति निरासाहरु पनि गुनासोहरु पनि हल हुँदै गइरहेका छन् ।
अन्त्यमा, नेकपा दोलखाका आगामी योजना र कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छन ? के छन् नयाँ योजनाहरु ?
दशैँ अगावै नेकपाले सचिवालय बैठक बसेर निश्चित योजनाहरु तय गरेको छ । हाम्रो दुई वटा पूर्ण बैठक बस्यो । तलसम्मको कमिटीहरुको बैठक बस्ने छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधिबीच अन्तरक्रिया गर्ने, अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारहरुले बनाएको योजना जनतासम्म लगेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, पार्टी संगठनले अब जनतासँग एकाकार हुँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पार्टी कमिटीहरुको बैठक बस्दैछ । तिहारपछि सवै स्थानीय तह र वडाहरुको प्रशिक्षण चलाउने, वडा कमिटीसम्मको बैठक बस्ने र जनताको हित हुनेगरी सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि अभियान सहित पार्टी तलसम्मको कमिटीमा र जनताको बीचसम्म जाने योजना बनाएका छौँ ।
८ कार्तिक २०७६ । १०ः०० बजे प्रकाशित
VIEWS: 5270 पटक हेरीएको